Saturday October 03, 2020 - 17:12:34 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Dalka Hindiya ayaa kaalimaha hore ka galay dalalka caalami ahaan ladhibaataysan caabuqa Carona Virus.
Wararka Hindiya ka imaanaya ayaa sheegaya in cudurka Covid19 uu jaray xawaare aan laga filayn islamarkaana uu geysanayo halaag daran oo ka dhan ah dadka hinduuska gaalada ah.
Hindiya dhimashadu waxay ka gudubtay 100 kun oo ruus taas oo ka dhigan in ay soo tiigsatay kaalinta sedaxaad ee dalalka ugu dhimashada badan waxaana ka horreeya oo kaliya Mareykanka iyo Baraaziil.
Tirada dadka u dhintay cudurka ee Hindiya ayaa gaartay boqol iyo koow kun oo ruux sida lagu caddeeyay tirakoob soo baxay aroornimadii waxayna tani umuuqqataa in Covid19 uu ku sii faafayo dalka labaad ee caalamka ugu dadka badan.
Tirooyinka Wasaaradda Caafimaadka waxay muujisay in wadar ahaan 100,842 qof ay illaa iyo hadda u dhinteen fayruska waddanka waxayna wasaaraddu ka digtay in ay dhintaan dad badan oo isbitaallada jiifa haddii aysan helin daryeel caafimaad oo tayo leh.
Dhanka bukaanada Hindiya waxay diiwaan galisay 6.47 milyan oo xaaladood, waxayna umuuqataa inay dhaafi doonto Mareykanka todobaadyo gudahood maadaama caabuqu uu si aad ah ugusii faafayo gobollada ugu dadka badan hindiya.
dadka Hindiya waxaa ku nool (1.3 bilyan oo qof) wuxuuna afar jeer ka badanyahay tirada dadka Mareykanka taas oo diiwaangelisay laba jeer tirada dhimashada arrinkan wuxuu keenayaa shaki badan oo ku saabsan tirakoobka rasmiga ah ee Hindiya diiwaan gelisay waxaana laleeyahay wax badan oo dhimasho iyo bukaanno ah ayay dowladdu qarinaysaa.
Dhinaca kale wadamada qaaradda Yurub ayaa sare uqaaday xaaladda feejignaanta ee ka dhanka ah Covid19, faransiiska,biljamka iyo ingiriiska ayaa dadkooda ugu baaqay in ay xirtaan maaskada looga gaashaanto carona gaar ahaan xilliyada ay ku suganyihiin goobaha shaqada.